စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ (လျာထားချက်) - Department of Technology Promotion and Coordination (DTPC)
စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ (လျာထားချက်)
စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန၏ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၂၀-၂၀၂၁) ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ (လျာထားချက်)
၁။ ပြည်သူပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၊ စက်မှုဇုံများတွင် စက်စွမ်းအား အမြဲမြှင့်တင်နိုင်ရန်၊ နည်းပညာနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို အထောက်အကူပေးရန်နှင့် စက်မှုဇုံများရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၏ နည်းပညာနှင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များ မြှင့်မားတိုးတက်လာစေရန် ကူညီဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ (၂၀၁၆-၂၀၁၇)ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ဒုတိယငါးနှစ် စီမံကိန်းကာလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန် လျာထားပါသည်-
(က) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစက်မှုစွမ်းအားမြှင့်မားရေး၊ ထုတ်လုပ်ရေး၊ တိုင်းတာရေးတို့ အတွက် နည်းပညာ များ မြှင့်တင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်၊
(ခ) ဓာတု၊ သတ္တု၊ ချည်မျှင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်မှုဇုံများ၏ စက်စွမ်းအားနှင့် နည်းပညာမြှင့်တင်ပေးရေးဆောင်ရွက်ရန်၊
(ဂ) လျှပ်စစ်နည်းပညာမြှင့်တင်ရေး အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့် အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်မှု နည်းပညာ နှင့် လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ပေးရန်၊
(ဃ) လိုအပ်သော စက်ကိရိယားများ၊ စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၊ ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ စက်များ၏ ဒီဇိုင်းပုံစံများ တွက်ချက်ခြင်း၊ တည်ဆောက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊
(င) နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံအလုပ်ရုံများ၊ စက်မှုဇုံများမှ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား ကျဆင်းစေသည့် အဓိက အခြေခံအချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက်မျာကို ပံ့ပိုးကူညီပေးရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်၊
၂။ စက်မှုနည်းပညာမြှင့်တင်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန ကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ နည်းပညာ တက္ကသိုလ်များ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များအတွက် ပညာရေးကဏ္ဍတွင် (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘဏ္ဍာနှစ်မှ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ ဒုတိယငါးနှစ် စီမံကိန်းကာလအတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန် လျာထားပါသည်-
(က) သုတေသန အခြေပြုတက္ကသိုလ်များဖြစ်သည့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ် များနှင့် အဆင့်မြင့်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များအား အာရှနှင့် ASEAN တက္ကသိုလ် များအဆင့်သို့ ရောက်ရှိရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် များမှ (၃၀)ရာခိုင်နှုန်းအား အဆင့်မြင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၊ အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်များအဖြစ်သို့ ထပ်ဆင့်မြှင်တင်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွား ပါမည်။
(ဂ) တက္ကသိုလ်များတွင် Technical Transfer Office များထူထောင်၍ ဒေသတွင်းရှိ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ သတင်းနှင့်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပါမည်။
(ဃ) တက္ကသိုလ်များအား စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ Industrialized တက္ကသိုလ်များ အဆင့်သို့ ရောက်ရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
(င) Intranet Based E-Library စနစ်ထူထောင်နိုင်ရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားပါမည်။
(စ) ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ တက္ကသိုလ်များမှ စာကြည့်တိုက်များနှင့် Online ချိတ်ဆက် အသုံးပြု နိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
Department of Technical Promotion and Coordination
The Tasks to be implemented during the budget year
From (2016-2017) to (2020-2021)
To upgrade the machinery power of public industries, workshops and industrial zones. The following tasks are proposed to implement during the second five years plan from (2016-2017) Budget Year to (2020-2021) Budget year.
(a) To upgrade technologies for increasing industrial powers, production, and measurement.
(b) To promote technologies and machinery power of industrial zones and chemical, metal, textile industries.
(c) To promote the production of electrical products, technology of electronics, actuator and electrical power.
(d) To perform required equipments, calculation of production machines’ designs and constructions.
(e) To investigate the fundamental facts of declination of production rate from the industries and industrial zones and have to support needs and then collaborate with the relevant stakeholders.
In educational sector of the technological universities, computer universities under department of technology promotion and cooperation, the following projects are estimated to proceed within the second five years plan from (2016-2017) Budget Year to (2020-2021) Budget Year.
(a) Research based flagship universities (Centers of Excellence of both Technological Universities and those of computer studies are intended to be promoted to ASEAN and the Asia level.
(b) 30 % of existing Technological Universities and Computer Universities are also intended to be to centers of excellence
(c) Technology Transfer Office will be formed and attached to each university in order to contribute relevant technical data for regional industrial and ICT environment
(d) University- Industry collaborations must be enforced to fulfill the requirements of each sector
(e) Intranet Based E-Library system will be established and implemented
(f) Partnerships among the libraries of foreign and national universities should be formed to implement online access based on knowledge sharing.
Total Hits : 63146